Yini ububanzi bekhasi lewebhu elilungile? | Martech Zone
Ukuklama iwebhusayithi nokusetha ububanzi bekhasi lewebhu kububanzi obulungile yingxoxo okufanele ube nayo. Abaningi benu baqaphele ukuthi ngisanda kushintsha ububanzi bokwakheka kwebhulogi yami. Ngicindezele ububanzi bekhasi ngamaphikseli ayi-1048. Abanye benu bangahle bangavumelani nalokhu kuhamba - kepha bengifuna ukwabelana ngezibalo ezithile nezizathu zokuthi kungani ngicindezele ububanzi bengqikimba ngokubanzi.
Amaphikseli ayi-1048 kwakungeyona inombolo engahleliwe, noma kunjalo.
Kwakunemithelela emibili ebalulekile ekwandiseni ububanzi bekhasi lami:
I-YouTube inikeza osayizi abakhulu bokushumeka manje. Uma uchofoza igiya elincane kubha eseceleni yekhasi levidiyo le-Youtube, unikezwa izinketho zosayizi abakhulu kanye netimu. Njengoba amavidiyo encazelo ephakeme eba yindawo evamile ku-Youtube, bengifuna ukufaka lawo mavidiyo kubhulogi lami futhi ngiwabonise ngemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka (ngaphandle kokudla ububanzi bekhasi lonke).
Ukukhangisa okujwayelekile kuza ngobubanzi bamaphikseli angama-125, 250 no-300. Amaphikseli angama-300 abonakala ephuma kakhulu kumasayithi wemali engenayo yezikhangiso futhi bengifuna ukuwafaka kahle kubha yami eseceleni.
Futhi-ke, kukhona okunye ukugoqa ngakwesobunxele nangakwesokudla sekhasi, okuqukethwe, nebha eseceleni… ngakho-ke inombolo yomlingo yayingamaphikseli ayi-1048 engqikimba yami:
Ngizihlole izibalo zabafundi bami?
Yebo kunjalo! Ukube iningi lezivakashi zami belisebenzisa izikrini zokuxazulula okuphansi, bengizobe ngicabanga okwesibili ngokwandisa ikhasi lami.
Ngemuva kokukhipha izinqumo zesikrini kwiphakheji yami ye-Analytics (Ku-Google izivakashi> Amandla wesiphequluli> Izinqumo Zesikrini), ngakha ispredishithi se-Excel semiphumela futhi ngadlulisa ububanzi enkambeni yokulungiswa.
IGoogle inikela ngesisombululo njengo 1600 × 1200, ngakho-ke udinga ukuthatha yonke into ukusuka kwesobunxele se- “x”, uyiphindaphinde ngo-1 ukuyenza imiphumela yezinombolo ukuze ukwazi ukuhlula ukwehla kuyo, bese wenza i-SUMIF ubone ukuthi zingaki izivakashi zinkulu noma zingaphansi kobubanzi bomklamo obubukayo.
= KWESOKUNXELE (A2, THOLA ("x", A2,1) -1) * 1
Ngabe ngishiye ama-22% abafundi abasebenzisa isixazululo esincane? Vele akunjalo! Into enhle ngesakhiwo esinokuqukethwe kwakho kwesobunxele nakwesokunxele sebha yakho eseceleni ukuthi ungaqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kusaphakathi kobubanzi beziphequluli eziningi. Kulokhu, abafundi bami abangama-99% basebenza ngaphezu kwamaphikseli angama-640 ububanzi, ngakho-ke ngilungile! Angifuni ukuthi baphuthelwe ngokuphelele ibha eseceleni, kepha lokho kulandela okuqukethwe.
Tags: aclarkumphenduliChrisVanukubiza okubandayoophendula nge-imeyilikylelacyizikhangiso ze-linkedinumkhankaso wokondlayokuthengisa crmukufunwa kokuthengiswayoukuzenzekelayo kokuthengisa okuthengiswayoizikhangiso zenhlalo
UJun 8, 2009 ngo-7: 20 AM
Ngiphakamisa ukwakheka kwe-hybrid nobubanzi besitsha se-CSS esingu-100%. Inqobo nje uma unobubanzi obulinganiselwe bebha eseceleni, iheda, unyaweni, nezindawo zokuqukethwe eziyinhloko zizolungisa ukulingana ububanzi obusele besikrini. Igcwalisa i-100% yewindi lesiphequluli lawo wonke umuntu, ngaphandle kwesinqumo sokuqapha somsebenzisi. Ngemuva kwalokho akudingeki ukuthi uphinde ubale amaphikseli noma ugcine ithrekhi yezibalo zomsebenzisi maqondana nezinqumo zokuqapha.
Jun 8, 2009 ku-12: 22 PM
Ngithanda kakhulu izakhiwo ze-hybrid, uBob - kodwa ngeshwa azidlali kahle kwesinye isikhathi nokuqukethwe uqobo. Mhlawumbe ngiyivila, kepha kulula kimi ukwazi ukuthi ama-max namaminithi angama-640px kusayithi lami. Ukwelula kunzima ukukhulelwa lapho ngibhala okuthunyelwe.
Ukukhetha komuntu siqu nje ngicabanga!
Jun 8, 2009 ku-12: 17 PM
Empeleni, ngiyavumelana nesiphetho sakho, kepha uma ngisebenzisa ukusethwa kobubanzi obulinganiselwe, ngilinganisela ububanzi kube ngamaphikseli angama-960.
Umuntu kufanele alandise ngemigoqo yokuphenya emile neminye imigoqo yesinqamuleli sesiphequluli ethatha ububanzi obengeziwe. Ngokuhlala ngaphakathi kwamaphikseli angama-960, umuntu uyaqinisekiswa ukuthi akukho ukuskrola kwesokunxele kuye kwesokudla kusinqumo sesikrini esingu-1024-wide screen.
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe uDoug. Ngisebenza kusakhiwo esisha (esibanzi) sesakhiwo se- I-Indiana Insider blog futhi lokhu okuthunyelwe yikho kanye ebengikudinga!
Jul 13, 2009 ku-4: 35 AM
kuyinqaba kakhulu. KuFirefox, isiza sakho sine-scrollbar evundlile ngo-1048, futhi asinakho ukubukeka okuhlanzekile uze uphume uye ku-1090.
Siyabonga ngezibalo ezinhle yize zivela ezinqumweni ze-Google
Sep 2, 2009 ngo-3: 03 PM
Njengoba usuthole i- isethwe ku-1048px, isiza sakho sibangela amabha wokuhambisa ovundlile kusikrini se-1024. Ngicabanga ukuthi bekungaba ngcono ukuskena i-100px isuke kububanzi (nokugoqa) kwebha yakho eseceleni nendawo yokuqukethwe ngakho ingena ku-728 × 1024. Yilokho okuqhutshwa kahle kakhulu namuhla.
Okuwukuphela kwecala elibhekene nalokhu kungaba ukuthi izinombolo zezibalo ziyakusekela… kepha njengoba ungazange uyinikeze leyo datha ku-athikili yakho, ngingasho ukuthi ukwakhiwa kwekhasi lakho kunamaphutha.
Nov 24, 2009 ngo-12: 51 AM
Manje senginokuqapha okungu-15 'ngesisombululo esingu-1024 × 768, ngibona ibha evundlile, futhi ngiyayizonda.
Feb 28, 2012 ngo-10: 36 AM
Akuwona wonke umuntu osebenzisa wonke amawindi kusikrini esigcwele - empeleni, bengizobheja ukuthi bambalwa abakwenzayo.
Ngine-blog yakho ku-80% windo… futhi nansi, ibha yokuhambisa evundlile
Futhi yini engekho esikrinini… lets see… nothing.
Ngakho-ke ibha yakho yokuskrola ayisho lutho.
Indlela elula yokulahlekelwa abafundi !!
Feb 28, 2012 ngo-1: 49 PM
Okuqukethwe kugxile ekhasini @ heenan73: disqus, enikeza umfundi lokho kanye abakudingayo. Uma ngilahlekelwa ngabafundi ngoba bobabili bangakubona okuqukethwe FUTHI babone ibha yokuhambisa evundlile… anginasiqiniseko sokuthi kwakungabafundi engangibafuna. Kukhona okuthile okuhlukile kokuqukethwe kwethu okukukhiphela ku-1217px ngakho-ke ngizokulandela ngomkhondo ngikulungise. Lokhu okuthunyelwe empeleni kubhalwe ngendikimba yangaphambilini. Siyabonga ngokungazisa!